Al-Shabaab oo weerar ku qaaday degaanka Camaara (Mudug) | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo weerar ku qaaday degaanka Camaara (Mudug)
Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo saaka kula jarmaadday saldhig ay ciidamada xoogga iyo daraawiishta Galmudug ay ku leeyihiin degaanka Camaara.
CAMAARA, Soomaaliya – Kooxda xiriirka la leh Al-qaacida ee Al-Shabaab, ay saaka weerar xooggan oo ku billawday is-miidamin ku qadey degaanka Camaara, oo dhaca Koonfur-bari goobolka Mudug.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay Dowladda Federaalka, Ciidamada Xoogga, qeybta 21-aad ay kahor rageen weerarka, islamarkaana ay qasaaro xooggan gaarsiiyeen Kooxda ku soo duushay Camaara, ayna dhawaan soo bandhigi doonaan tirada ay dileen.
Al-Shabaab ayaa dhankooda guulo ka sheegtay dagaalka oo ahaa mid aad u culus, iyadoo warbaahinta ku hadashada afka Al-Shabaab, ay sheegtay in Kooxdu ay gacanta ku dhigtay gaadiid dagaal iyo saanad milliteri.
Ciidamada XDS, iyo kuwa Daraawiishta Galmudug, ayaa 2 August 2021, la wareegay gacan ku heynta Camaara, waxaana Ciidamada degaanka la wareegay hoggaaminayay Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan (Joon).
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi, ayaa dhawaan sheegay in maalmaha soo socda Kooxda Al-Shabaab, laga fara-maroojin doono degmada qaddiimiga ah ee Xarar-dheere, hayeeshee, ku dhawaad 10-kii maalin ee la soo dhaaay ma jirin howl-gal muuqda oo laga fuliyay Koofurta Mudug.